Sahirana ny Malagasy: nanjary ambin-javatra ny fomba amam-panao | NewsMada
Sahirana ny Malagasy: nanjary ambin-javatra ny fomba amam-panao
… Efa hananika ny 60 taona afaka andro maromaro ny niverenan’ny Fahaleovantenan’i Madagasikara, mbola mitady ny very ihany ny Malagasy hatramin’izao. Asa na ho hita ihany izy ireny na tsia?
Efa mitsidika tsikelikely ny vanim-potoan’ny ririnina. Maro ny fomba malagasy tanterahina ao anatin’io, anisan’izany ny famorana, ny famadihana, sns. Raha ny tokony ho izy, lanonambe ny tanterahina amin’ireny, saingy tsy izay ny zava-misy amin’ity taona ity, noho ny fisian’ny valanaretina Coronavirus. Tranga izay vao mainka manampy trotraka indray ny efa nisy teo aloha. Malagasy tsy mahalala ny fombany, menatra amin’ny fivavahany, tsy mahatandrina ny fadiny… Niampy izany amin’izao vanim-potoana izao satria toa tsy mahalala intsony ny tena maha izy azy ny sasany amin’ny Malagasy satria sahirana tanteraka! Malagasy tsy manam-potoana kely akory hitodihana amin’ny maha izy azy fa tsy maintsy mitady ny hohanina anio.
Manampy betsaka amin’ny fialana amin’ny fahasahiranana anefa ny fahalalana ireny fomba amam-panao ireny. Zovy moa ankehitriny ny tokantrano malagasy tsy mampiasa ny evoka hoenti-misoroka ny valanaretina misy ankehitriny? Tafiditra ao anatin’ny fomba amam-panao ary fahalalana ananan’ny Malagasy izany. Manana ilay fahendrena “firaisankina no hery, izay mitambatra vato, izay misaraka fasika” ny Malagasy ka inona ny antony tsy hifamenoana amin’ny lafin-javatra sasany?
Azo eritreretina fa vokatry ny fahasahiranana lalina mianjady amin’ny Malagasy no anisan’ny miteraka ny “varimbarian’ny lavitra ka tsy mahita ny ambany maso” tahaka io. Mpikaroka sy mpahay momba ny fiarahamonina sasany aza milaza fa “raha mbola ao anatin’ny fahantrana ny firenena iray, tsy ho fantany mihitsy fa manan-karena izy”! Petrakevitra toa mifanohitra kanefa maneho ihany koa fa tsy tokana ny harena… Fa ny tena goavana, petrakevitra manambara tsy mivantana fa toa tsy misy izany firenena mahantra na sahirana izany fa, na nampahantraina izy ireny na natao izay nahasahirana azy!
… “Tsy izay firenena (na ny mponina ao aminy) lazaina fa mahantra akory dia tsy manana mihitsy ny maha izy azy. Diso izany, mbola voatahiriny tsara izy ireny ka raha hain’izy ireo ny mitrandraka sy mampiasa io maha izy azy io, ho resy tosika ireo ravindravina natentina”, hoy ilay mpampianatra taranja filozofia iray izay, fony fahavelony.